July Dream: One year Anniversary
သြော်ဆရာကြီးက တစ်နှစ်တောင် ပြည့်သွားပြီလား။ လေးစားပါ၏။
အဟုတ်ဘဲ အရင်တုန်းက ၀င်းကလော စာလုံးတွေ မမြင်ရလို့ခဏခဏလာလာအော်
ရတာ မှတ်မိတယ်။ လင်းတို့ ကတော့ တနှစ်ပြည့်ဖို့ တော်တော်လိုသေးတယ်။( နုသေးတယ် နုသေးတယ်)
မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ကိတ်လေးတော့ စားရရှာသားပဲ...
နောက်နှစ်တော့ ချန်စာလုံးမပါတဲ့ တရုတ်မစစ်စစ် (အသားမဲချင်မဲပစေ) လေးနဲ့ မွေးနေ့ကိတ်တူတူခွဲဖို့ အခွင့်အရေးလေး ထပ်ရကောင်းပါမှာပါ...
အင်း . . . ဒီလိုနဲ့ပဲ အသက်တွေကြီးလာလိုက်တာ...
Happy Birthday Kenry!
အော် ဂျူလိုင်တို့က ဘလော့သက်တမ်းနဲ့ မွေးနေ့ကို ခုလို ရောရောရှိ လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လေ.. အမကတော့ လိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပြီနော်.. အဲဒီလိုရာဆိုတာ ဥစ္စာပေါ .. ရုပ်ချော.. ပညာတတ်.. သဘောမနောကောင်း .. အသက် မကြီးနဲ့.. ဟိ တရုပ်မလေး ဖြစ်ပါစေ...
အမ ရှာတွေ့ထားတာ ရှိတယ် သိလား။ သိချင်ရင် ဂျီမှာ တွေ့ရင်မေး ပြောပြမယ်.. ဒန် တန် တန်
ကိုဂျူလိုင်မွေးနေ့အတွက်ရော blog မွေးနေ့အတွက်ပါ ပေါင်းပြီး ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာ။ Happy Birthday ပါ ခင်ဗျာ :)
happy birthday. all the best
ဘလော့ဂ်လေးအတွက်ရော ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်အတွက်ရော မွေးနေ့ဆုတောင်းပေါင်းပြီး တောင်းပေးခဲ့တယ်ဗျာ.
အိပ်၍ မပျော်သောညများ ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်ပါစေသား...
လူပြိုရီးပီပီ ဘတ်ဒေးကိတ်တစ်လုံးပဲကျွေးတယ်.. နည်းတယ်နော် ...
အခုလို အမှတ်တရလေး ရေးပေးထားတဲ့အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မွေးနေ့ကို နောက်ကျမှ ရောက်လာရပါတယ် . .
=) .. မွေးနေ့ရှင်ကြီး အိပ်ရေးဝပါစေ..
ဆက်လက် မျှဝေနိုင်ပါစေ လို့ ..
မွေးနေ့ဆုတောင်းတွေ နိုင်သလောက် တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အတော်လေးကို အားကြိုးမာန်တက် အောင်သွယ် လုပ်နေကြတာပဲနော့။ အားကိုး သင့်တဲ့သူတွေ ဆိုတော့လည်း အားကိုးရမှာပေါ့ဗျာ။
စကားမပီ လေဖျန်းထားတဲ့ နှင်းပွင့်ဖြူလေး
၀က်သိုးက ညည်းနော်။ ကျုပ်မဟုတ်ဘူး။ ကိတ်မုန့်က တစ်လုံးတည်းဆိုပြီး သေးသေးလေး မထင်နဲ့။ အလျား ၂ ပေ အနံ ၁ ပေ ရှိတဲ့ကွဲ့။ လူစားရင်တော့ ပိုပါတယ်။ ၀က်စားရင်တော့ ဘယ်လောက်မလဲ ဟယ်။ အဟ...
နိုင်သလောက် ဆုတောင်းပေးသွားတယ် ဆိုတော့ ဘယ်လောက်များ သယ်လာခဲ့လဲ မသိဘူး။ အဲဒီလိုမှန်း သိရင် ၀ိုင်းကူသယ်ပေးပါတယ်ဗျာ။ များများ ရတာပေ့ါ။ အဟက်...
(နဂိုမလှမှာ မလှဆင့်လို အိုးးးးးးးးးးမတင့်တယ်)
ဘူးသီးငပေါင်းကြော်တွေနဲ့ ရေးသွားတာ မဖတ်တတ်ဘူး ခင်ဗျ။ ဘာသာပြန်ပေးအုံး။ အဟက်...
မြေးမလေး ကြေးအိုး (chaos)
ကျုပ်မလှလည်း အေးဆေးပါဟယ်။ ညည်းသာ လှချင်ရက် စက်စက်ယို ဖြစ်နေတာပါ။ အဟ... သိပါတယ်လေ။ ဘာရဲ့ စွမ်းအားတွေ ဆိုပဲ...
ကျွန်တော်က မြေးတောင် ရနေပြီဆိုတော့ အသက်ကိုတော့ မေးမနေပါနဲ့လား။ ဂျူလိုင်သားတွေ ရုပ်ချော သဘောကောင်း ခံစားထိရှ လွယ်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ (မနာလိုတဲ့လူတွေက ဘေးတိုက်သွားတဲ့ ဂဏန်းတွေလို့ စကားတင်း ဆိုမှာပဲလေ... အင်း... ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါဗျာ။)
:D Happy Birthday ! :P
ကိုဂျူလိုင်... ၇၊ ၇ မှာမွေးတာလား။ မိုက်တာပေါ့...ဘာပဲပြောပြော7ဆိုတာ ဂဏန်းဗေဒင်မှာတော့ လပ်ကီးအကောင်းဆုံး ဂဏန်းပဲ။ ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ...:)
ကျွန်တော်7July ဆိုတဲ့ သမိုင်းဝင် အထင်ကရနေ့ကြီးမှာ မွေးခဲ့တာပါ ခင်ဗျာ။ အဲဒါကြောင့်လည်း.... တခါတလေ ပုန်ကန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးက ရှိတယ်ဗျ။ ကျွန်တော့် အိမ်ကတော့ ပြောပါတယ်... အမြဲတမ်း ကလန်ကဆန် လုပ်တယ်တဲ့ဗျာ။
ကံကောင်းခြင်းဂဏန်းတွေနဲ့ စတင်မွေးဖွားလာတဲ့အတိုင်း ကံကောင်းခြင်းတွေ ဆထက်ထမ်းပိုးတိုးနိုင်ပါစေဗျာ
ဆုတောင်းတာ အတော်နောက်ကျလို့ ရန်ကုန်ကနေထွက်တာ အခု တရုတ်ပြည်ထဲတောင် ရောက်တဲ့အထိ ကြာသွားတယ်။ ဟိ..
အပေါ်က ကွန်မန့်တွေမှာ ဖတ်ရတယ်။ တရုတ်မလေးနဲ့ ဆိုပဲ။ ဟိ.. အားပေးတယ်။ ဆက်သာလုပ် ကိုယ့်လူ။ ကျော်ကြားတဲ့ လူတွေရဲ့ နောက်မှာ အလွန်တော်တဲ့ အိမ်ရှင်မရှိတယ်တဲ့။ ဟဲဟဲဟဲ
July 13, 2008 at 3:36 AM
ဆက်လုပ်ဆိုပဲ... ရဲဘော် ဆက်လုပ်ပေါ့။ အဟ...
ခုနစ်ဂဏန်းလေးက ကျွန်တော့်အတွက် အမြဲကို လေးနက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကောင်းရင် ကံကောင်းမှာပါဗျာ။
ကျွေးပါတယ်... စားချင်တာ စားပါ။
အိပ်ရေးကတော့ ၀ချင်ပါတယ် ဗျို့။
ကွန်းမန့်ခဲတစ်လုံးနဲ့ ငှက် ၂ ကောင် ပစ်သလိုပဲဗျာ။ ကျွန်တော်က မကျော်ကြားဘူး ဆိုတော့ ကျွန်တော့် နောက်မှာ အလွန်တော်တဲ့ မိန်းမ မရှိဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပဲပေါ့ဗျာ။ မိန်းမလည်း မရှိသလို ကျန်တာလဲ မရှိပါဘူးဗျာ။ အဟက်... တော်ကြာ အထင်ကြီးနေမှာ စိုးလို့ပါဗျ။
happy birthday July ! I love you. :rm: